In Burmese | Kamayut Services
Techninal Consulting and Services for SF Bay Area Community & Beyond – Please support local community small business
Openaticket with us …
Useful Tool – Pali to Burmese to English Translator -GTalk IM Bot
နည်းပညာအပ္ပဒိတ် – ပါဠိ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ဂျီတော့ခ်ကတဆင့် ဘာသာပြန်နိုင်ပြီ
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ၊ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၁
မိတ်ဆွေ အင်ကြင်းက လက်တို့လိုက်လို့ ဂျီတော့ခ်ကနေ pali2myn@gmail.com သူငယ်ချင်းအဖြစ် အက်ဒ် (add) လိုက်တယ်။ ထိုသူက GTalk Instant Messaging BOT အင်တာနက်စက်ရုပ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကို ချက်ခြင်း သူငယ်ချင်းခန့်ပစ်လိုက်တယ်။ သူကို chat box ထဲကနေ မိမိက ပါဠိလို ရိုက်ရင် မြန်မာနဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ပေးတဲ့အလုပ်နဲ့ အလိုအလျောက် တုန့်ပြန်ပါတယ်။
ပထမဆုံး မေးလိုက်တာက “ကုသိုလ်” … ချက်ခြင်းစာပြန်တာက “သင်ရှာဖွေသောစာလုံး သူ့မှာ မရှိ” တဲ့။ ဟိုက် … သူ့ဆီမှာ ကုသိုလ်မရှိဘူး ဆိုပါလား။ ဒါနဲ့ မင်္ဂလာကို မေးတော့လည်း သူ့မှာ မင်္ဂလာမရှိ။ ဒါနဲ့ သြကာသကို လှမ်းမေးတော့ သူ့မှာ သြကာသအကြောင်းလဲ မသိ ဖြစ်နေတယ်။ သို့သော် မြန်မာဘာသာက မွေးစားထားပြီးသားမဟုတ်တဲ့ အခြားပါဠိဘာသာစကားလုံးများကိုတော့ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ဘာသာပြန်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ – ဒါန၊ ဓာရဏ၊ ဓမ္မ စသည် စသည် …
အခုအမြန် သတင်းကောင်းလက်တို့လိုက်ပါတယ်။ သင်တို့ pali2myn ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ မေးချင်တာမေးပေတော့။ မြန်မာပြည်က http://www.mandalayalpha.com/ ကို အခြေခံပြီး အင်တာနက်ပေါ်က အိုင်တီမောင်မောင်က ဖန်တီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ Google ကို လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်လှစ် သွားလာခွင့်ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာတွေရဲ့ တီထွင်ဖန်တီ ထုတ်လုပ် ကြံဆံနိုင်မှုတွေဟာ သည်ထက်ကို ပိုပြီး ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
ပါဠိတူမြန်မာမှာ “အသေ၀နာစ” လို့ ရိုက်လိုက်တယ်။ “မမှီဝဲ မဆည်းကပ်သင့်သူတွေ” လို့ ဘာသာပြန်ပေးမယ့်အစား “ကြံ့ဖွတ်နဲ့ စပ်ကျသည့် တပ်မတော်အစိုးရ” လို့ ပေါ်လာရင် ကာလနာတိုက်ရချည်ရဲ့။
Zaw Gyi Font on the Smart Phone
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အိုင်ဖုံးနဲ့ အင်ဒရိုက်မှာ ဖတ်နိုင်ဖို့
ကမာရွတ်သား၊ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၁
ခဏ ခဏမေးနေလို့ မြန်မြန် ဖြေထားလိုက်ပါတယ်။
အိုင်ဖုံးသမားတွေက ဖုံးထဲက Apps Store ကိုသွားပြီးတော့ Zawgyi ဆိုတာကို ရှာလိုက်ပါ။ အဲသည်မှာ iBrowser MM App (Free) ရှိတယ်။ အဲဒါက Zawgyi Font နဲ့ အင်တာနက်တွေ၊ အီးမေးတွေ၊ ချက်တွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်တွေကို ကြည့်တဲ့ စနစ် ဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ဇော်ဂျီနဲ့ မြန်မာဝက်ဆိုက်တွေ၊ အီးမေးတွေ ဖတ်လို့ရပြီ။
အင်ဒရိုက်သမားတွေကတော့ ဖုံးကို Root လုပ်မှ ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဇော်ဂျီ TTF Font ကို အင်ဒရိုက်ဖုံးထဲက FallBackFont.TTF နဲ့ လဲပြီး အလွယ်နည်း သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၊ ယူအက်စ်ဘီကေဘယ်၊ ဂျားဗား အင်ဒရိုက်အက်စ်ဒီကေ လိုမယ်။ Hack / Root လုပ်တဲ့ Script လိုမယ်။ ဂူးဂဲမှာ Rooting Android ဆိုရင် အများကြီး တွေ့လိမ့်မယ်။ နောက်တနည်းကတော့ ဂျာဗား၊ အီးကလစ် Eclipse က File Explorer ကနေ ဖောင့်ဖိုင်ကို အင်ဒရိုက်ရဲ့ ဖောင့်လိုက်ဘရီထဲကို တွန်းထည့်လိုက်တာလို့ ဆိုတယ်။
အဲသလောက်ဆိုရင် ရပြီ ထင်တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၀က်သမားတွေက သူတို့ဝက်ဆိုက်ထဲမှာ ဖောင့်တွေကို Embed လုပ်ထားလာကြပြီ။ မိုဘိုင်းဘရောက်ဇင်းအတွက်လည်း ဖောင့်တွေကို အမ်ဘက်လုပ် တခါတည်း ပူးတွဲပြီး ထည့်ရေးထားတယ်။ ဥပမာ – အင်း ဥပမာလည်း မပေးတော့ဘူး။ ရှာကြည့်လိုက်ဗျာ။
Thank you notes from Myat Sasanar Blog
ကမာရွတ် နည်းပညာ အဖွဲ့ သို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း-
ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လိုက်ရာ အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သွားပါသည်။
မိမိဆိုဒ်လေးမှာ http://myatsasanar.blogspot.com/ ဂရိနိုင်ငံ အခြေစိုက် မြတ်သာသနာ ဓမ္မစာမျက်နှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကမာရွတ် နည်းပညာ အဖွဲ့ သို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပို့ စ်လေး ရေးတင်ပေးထားပါသည်။
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ မိုးမခ မှာလည်း လင့်ခ်ပေးလို့ ရရင် မြတ်သာသနာ ဆိုဒ်လေးကို လင့်ခ် ပေးစေချင်ပါသည်။ တရားအလှူ
ကမာရွတ် နည်းပညာ အဖွဲ့ သားများအားလုံး ကျန်းမာပါစေ။
Q & A with Kamayut from MoeMaKa
မေးချင်ရာမေး၊ ဖြေချင်ရာဖြေ – ၁
ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၁
မိုးမခ၀က်ဆိုက်နဲ့ အခြားဝက်ဆိုက်တွေ၊ ကွန်ပြူတာသုံးစွဲမှု နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ကမာရွတ်သားက ကမာရွတ်ဝက်ဆိုက်တခု ထောင်လိုက်တယ်။ (www.kamayut.com )၊ ဒါက ကြော်ညာတာပါ။ အဲသည်မှာ သူက e-ticket စနစ်တခု တင်ထားတယ်။ လမ်းကြုံလို့ ခလုတ်တိုက်သူတွေက မေးချင်တာတွေ မေးသွားဖို့၊ အီးမေးလိပ်စာနဲ့ သာ အမှန်အကန်မေးရင် အမှန်အကန်ဖြေမယ်ပေါ့။ မေးခွန်းတွေ အများကြီး မဟုတ်တောင်မှ မေးခွန်းတွေ လာကြပါတယ်။ အဲသည်ထဲက မေးခွန်းတွေမှာ အများသူငှာ သိလိုကြတဲ့ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တိုတိုနဲ့ စီစဉ် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၁။ မြန်မာစာဖောင့် ဇော်ဂျီ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ
www.Zawgyi.net ကိုသွားပြီးတော့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ ကီးဘုတ်ဒရိုက်ဗာကလည်း အဲသည်မှာ ရှိပါတယ်။ Windows7လည်း ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီပဲ ထည့်ပါ။ ဧရီယယ်-ဇော်ဂျီဖောင့် ကိုတော့ မထည့်ပါနဲ့။ ကီးဘုတ်ကို မြန်မာကီးဘုတ်ပြောင်းတာက သင့်ကီးဘုတ် ဘယ်ဘယ်က Ctrl + Shift ကီး ၂ ခု တွဲပြီး နှိပ်ရင် ရပြီ။
၂။ MAC ပေါ်မှာကော ဇော်ဂျီထည့်လို့ရသလား
ရပါတယ်။ ဒီမှာသွားကြည့်ပါ။ http://edwardwitten.blogspot.com/2007/10/zawgyi-myanmar-keyboard-for-mac-os-x.html ။ လွယ်ပါတယ်နော်။ ကီးဘုတ်ကော၊ ဖောင့်ကော တွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ သူ့ကီးဘုတ် ချိန်းတာက Apple Key + Space Bar တွဲနှိပ်တာပါ။ ဇော်ဂျီkey အောက်ဆွဲ အပေါ်ဆွဲတွေက Alt ကီးကို သုံးပါတယ်။
၃။ ယူနီကုတ် ဘယ်ဖောင့်တွေ ထည့်ထားရမလဲ
လောလောဆယ်ကတော့ Myanmar3 နဲ့ ဧရာ ဖောင့်တွေကို ပြည်ပကသူတွေ ထည့်တာများပါတယ်။ ဘီဘီစီ နဲ့ အင်န်အယ်ဒီဘားမား ၀က်ဆိုက် ၂ ခု ကြောင့်ပါ။ ကီးဘုတ်ထည့်စရာ မလိုပါဘူး။ ဖတ်ရုံပဲကိုး။ ဖိုင်းယားဖော့စ်ကို ဇော်ဂျီအတွက်ထား၊ ယူနီကုတ်ဖောင့်တွေကို တခြား ဘရောက်ဇာ – အိုင်အီးတို့ ခရုမ်းတို့အတွက် ထားပြီး ခွဲဖတ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
၄။ ဖောင့်တွေ အချင်းချင်းပြောင်းချင်တယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ပြည်တွင်းက ဖောင့်တွေနဲ့ အင်းဝတို့ လာမယ်၊ ပြည်ပက ၀င်းမြန်မာတွေ လာမယ်။ အစုံစုံကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖောင့်တခုတည်း ပြောင်းဖတ်ချင်ရင်တော့ Kanaung Converter ကို သုံးပါ။
ဒီမှာ ယူပါ။ တချိူ့ဟာတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် အယ်ရာ ပြတယ်။
၅။ ဓာတ်ပုံတွေ စာသားတွေကို အကြီးချဲ့တဲ့အခါ ဖိုတိုရှော့၊ အီလပ်စတြီတာမှာ ၀ါးသွားတာ၊ ပြဲသွားတာ မဖြစ်ချင်ဘူး။ ပြီင်္းတော့ နောက်ခံပိတ်ကားတွေ ပိုစတာတွေ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်လိုသွားအပ်လို့ ရသလဲ။
ဓာတ်ပုံက မူလပုံဆိုရင် ချဲ့ ချူံ့ ပြသနာမရှိပါ။ အင်တာနက်က ပုံတွေဆိုရင်တော့ resolution က သေးတယ်။ ၂၀၀ လောက်ရရင် အတော်ကောင်းတယ်။ ၃၀၀ ကနေ ၆၀၀ လောက်အထိ blow up လုပ်တဲ့ ဖိုတိုရှော့ ပလပ်ဂင်တွေ ရှာသုံးပါ။ စာသားတွေကတော့ အသေးကနေ အကြီးကို ချဲ့တာထက် နဂိုကတည်းက စာလုံး အကြီးဆိုက် ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း Illustrator မှာ သွား ရိုက်ထားပါ။ ဒါဆိုရင် ရပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီက အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီဆိုက်မှာ အပ်တယ် ပြောတယ်။ http://www.esigns.com/, 248 Signs, Inc DBA , 7729 Lochlin Dr, Brighton, MI 48116.
၆။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကာကွယ်ဖို့၊ စပိုင်ဝဲယားတွေကို တားဖို့က ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ
McAFee, Norton နဲ့ AVG (http://free.avg.com/us-en/homepage ) တွေ သုံးကြတယ်။ အဲသည်က ကာကွယ်ရေး ဆက်တင်တွေကိုတော့ သေချာလေ့လာပြီး ဆက်လုပ်သင့်တယ်။ ဒီအတိုင်းထည့်ထားလည်း ဗိုင်းရပ်စ်က ၀င်တာပဲ။ စပိုင်ဝဲယားကတော့ Spybot Search & Destroy (FREE!)့ို သုံးကြပါတယ်။ အဲသည်မှာ အမြဲ Update လုပ်ဖို့ရယ်၊ Immunize လုပ်ဖို့ရယ် မမေ့ပါနဲ့။ ကွန်ပျူတာကို အပတ်စဉ် Scan လုပ်ပြီး စောင့်ကြည့်ပါ။
အီးမေးတိုင်းလဲ မဖွင့်နဲ့၊ လင့်ခ်တွေ့တိုင်းလည်း မနှိပ်နဲ့။ အီးမေးတိုင်းဖွင့်တော့ ကိုယ့်ဟာတွေ ပေါ်၊ လင့်ခ်တွေတိုင်း နှိပ်တော့ ပေါ်ရုံတင်မက ဖုံးဖိလို့မရ … ဆိုတဲ့ စာချိူး ရှိတယ်။ ဒါက အသစ်စာချိူး။
၇။ ကွန်ပြူတာကို သန့်ရှင်းအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲ။ ဆော့ဝဲနဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရ မေးတာပါ
CCleaner (http://filehippo.com/download_ccleaner/ ) ကို သုံးပါ။ ပုံမှန် ဖွင့်ပြီးတော့ စနစ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။ PM = preventative maintenance ပေါ့။ PC clean up လုပ်တဲ့သဘော။ စက်ကို အမှိုက်စုပ် သလို လုပ်ပေးလို့ သန့်ရှင်း မြန်ဆန်လာမယ်။ ဒါက ဖရီးပါ။ ငွေပေးစရာ မလိုဘူး။
၈။ ကွန်ပြူတာစနစ်ကို သွားလေရာ ယူအက်စ်ဘီတို့၊ အိပ်စတာနယ်ဒရိုက်ဗ်တို့ထဲမှာ ထည့်ထားပြီးတော့ တွေ့ရာ PC & MAC & Linux ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ ပြန်တင်ပြီး သုံးလို့ရသလား
ဒါမျိူးကို Virtulization, VMWare, Virtual Machine တို့အဖြစ် သုံးတယ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ၀င်းဒိုးနဲ့ ပရိုဂရမ်ဖိုင်၊ မိုင်ဒေါ့ကူးမင့် ယူဇာ ပရိုဖိုင်းတွေကို စက်ပေါ်မှာ အသေမတင်ထားဘဲ မူလကွန်ပြူတာရဲ့ ဖိုလ်ဒါ တခုထဲ ထည့်ပြီး ဖိုလ်ဒါကို သွားလေရာ သယ်သွားနိုင်တဲ့ သဘောပေါ့။ Virtual Box လို့လည်း ခေါ်တယ်။ သူ့ကို ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်ဗ်ထဲ ကော်ပီကူးထားရင် သူများအိမ်က ကွန်ပြူတာမှာ သူ့စနစ်ကို မထိခိုက်စေပဲ ကိုယ့်စနစ်ကို သီးသန့် ဖွင့်ပြီး သုံးနိုင်တယ်။ သူ့ဆီမှာလည်း ဘာမှ မကျန်ရစ်ဘူး။ ကွန်ပြူတာထဲက ကွန်ပြူတာစနစ်ပေါ့။
အလကားရတာကတော့ VBOX ပဲ။ http://www.virtualbox.org/ စမ်းကြည့်ပါ။ ကြိုက်သွားမယ်။ အပြေးအလွှားသမားတွေက ဖိုလ်ဒါတခုထဲ အိတ်ထဲထည့်ပြီး သွားရုံပဲလေ။ ကျပျောက်သွားရင်တော့ ဘက်ကပ်လုပ်ထားတဲ့ မူလစက်ကနေ ပြန်ကော်ပီဆွဲပေါ့။
(ကဲ ဒီလောက်ပါပဲ။ လောကဓာတ်ခန်းက သာဂိလည်း ဒီမှာ နားမယ်။ ကမာရွတ်ဒေါ့ကွန်က နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံဝက်ဆိုက်အဖြစ် ဖွင့်တာဖြစ်တယ်။ ကမာရွတ်သားက သူမသိရင်တောင် သူ့ဆရာတွေ သူ့ကျောင်းသားတွေကို လိုက်မေးမယ် ပြောတယ်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က ကွန်ယက်တွေကိုလည်း လိုက်ချိတ်မေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ မေးခွန်း လွယ်လွယ်တွေကတော့ စေတနာနဲ့ မေတ္တာရိ လုပ်မှာပါ။ အိမ်ရှေ့က ရေတွင်း အိမ်နောက်ပြောင်းရမယ် ဆိုရင်တော့ သူလည်း အလကားတော့ လုပ်မယ် မထင်ဘူး။ စာတောင် ပြန်မယ် မထင်။)
How to install Zawgyi Burmese Font
Please go to www.zawgyi.net
You will be able to install the Zawgyi Font and its Keyboard Driver for Windows
Welcome Message from Kamayut Team
ကမာရွတ် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု နဲ့ အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့က ကြိုဆိုပါတယ်
Welcome to KAMAYUT Technical Services and Consulting Group
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, email – contacts@kamayut.com
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်တီနဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အသက်မွေးသူ၊ လေ့လာသင်ယူနေသူ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်အနေနဲ့ နည်းပညာလုပ်အားပေး ဒါနအလုပ်တခုကို ထုတ်ဖော်ပြသရရင် – ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စတင်တဲ့ မိုးမခ သတင်းနဲ့ မီဒီယာ ၀က်ဆိုက်ဆိုင်ရာ အိုင်တီလုပ်ငန်းတွေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေပါတယ်။ အခြား ၀က်ဆိုက်တွေ လုပ်အားပေးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း တတ်စွမ်းသလောက် ကူညီ လုပ်အားဒါန ပြုလျက်ရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက် နဲ့ ၀က်ဆိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ မေးခွန်းတွေ၊ ပြဿနာတွေကို အဖြေရှာပေးဖို့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မေးပြီး၊ ကျနော်တို့ဆီမှာ အဖြေအဆင်သင့်ရှိရင် အချိန်တိုတွင်း အမြန်ဆုံး ပြန်ကြားပေးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။ လွယ်ကူ သက်သာတဲ့ မေးခွန်းတွေအားလုံးအတွက်ကတော့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အများပြည်သူတွေ သိရှိနိုင်အောင်လည်း ဘလောဂ့်မှာ တင်ပေးပြီး မျှဝေထားပါ့မယ်။ အလားတူ မေးခွန်းတွေ မေးလာရင် ပြန်ညွှန်းရတာ လွယ်သွားပြီပေါ့။
ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပြင်ဆင်ရတာ၊ အဖြေရှာရတာ၊ ရှင်းလင်းရတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ပြဿနာတွေအတွက်ကတော့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၀န်ဆောင်ခ၊ အတိုင်ပင်ခံခ တစုံတရာ သတ်မှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကလည်း နေရာ ဒေသ အချိန်အခါပေါ် မူတည်ပါတယ်။
တခြား မြန်မာမိသားစုတွေ၊ ကွန်မြူနီတီတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အရေးကိစ္စတွေကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်း ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စတာတွေကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကမာရွတ်ရဲ့ နည်းပညာကွန်ယက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ ပညာရှင်တွေ၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ စေတနာရှင်တွေကို အကူအညီတောင်းပြီး အဖြေရှာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လာလို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ကမာရွတ်က ထိုပညာရှင်များနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ အဲသည်အတွက် ၀န်ဆောင်ခ ပေးစရာ မလိုပါ။ အဆိုပါ ပညာရှင်များရဲ့ ၀န်ဆောင်ခ၊ အတိုင်ပင်ခံခတွေကတော့ သူတို့နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရများ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ၊ စည်းကမ်းများနဲ့ အညီ လိုက်နာပြီး ကမာရွတ်က ၀န်ဆောင်မှု တိုင်ပင်မှု ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို စည်းကမ်းဥပဒေများကို ချိူးဖောက်ခြင်း၊ ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း၊ ကျူးလွန်ရန် ကြံစည်ခြင်း ပြုလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကမာရွတ်က ၀န်ဆောင်မှု၊ အတိုင်ပင်ခံပြုမှုတွေ အားလုံးဟာ အပြုသဘော ရည်ရွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မှားခြင်း၊ မှန်ခြင်း ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ကမာရွတ်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု၊ အတိုင်ပင်ခံပြုမှုတွေဟာ မိမိ သဘောဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ၂ ဦး ၂ ဖက် မေးမြန်းစုံစမ်း ကြတာ ဖြစ်လို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိူး ရလဒ်တွေကို ကမာရွတ်နဲ့ တဖက်စားသုံးသူ အားလုံးမှာ တာဝန်မရှိပါ။ ဒါကတော့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း တခု အနေနဲ့ တရားတဘောင် ဖြစ်ခြင်း၊ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကို ၂ ဖက်စလုံးက ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြီး သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Our Advertisment for MoeMaKa
Kamayut Technical Services
Baradra – Fashion & Gifts Collection – SF
Burma Village – Food Catering
Little Yangon – Burmese Restaurant in SF
Metta Nanda Foundation, Yangon, Myanmar
MoeMaKa Burmese News Group
Mudita Shwe Kyaung – Burmese Monastery SF
SF Burmese Community Book Drive for Children
SFC Cable Systems
In Burmese (7)
Kamayut Technical Services, PO Box 320207, San Francisco, CA 94132-0207